နေ့တိုင်းနီးပါး နေပူထဲမှာ အချိန်အကြာကြီး လမ်းလျှောက်ကြသူများ အတွက် ကျန်းမာရေး အကြံပေးများ | CeleTrend
February 19, 2021 by CeleTrend
အခုလို နေ့တိုင်းနီးပါး နေပူထဲမှာ လမ်းလျှောက်နေသူတွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်တတ်တာ တွေကတော့(၁) အပူရှပ်ခြင်း (Sunstroke)(၂) လည်ချောင်းနာခြင်း (Sore Throat)(၃) ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း (Dehydration)(၄) ပင်ပန်း၊ နွယ်နယ်လွယ်ခြင်း(Tireness)(၅) ကြွက်သားများ ညောင်းညာ၊ ကိုက်ခဲခြင်း (Muscle Pain)(၆) ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း (Headache)(၇) အန်ချင်သလို ခံစားရခြင်း (Nausea)(၈)အသားအရေ နေလောင်ခြင်း (Sunburn)(၉) ဆီး၊ ဝမ်း၊ လေချုပ်ခြင်း (Constipation)အစရှိတဲ့ ရောဂါ၊ လက္ခဏာများကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်သင့်လဲ ?အပေါ်မှာ ပြောပြပေးသွားတဲ့ အချက်တွေ မဖြစ်အောင် ကြိုတင်၊ ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများကတော့ –(၁)လုံလောက်စွာ အိပ်စက်ခြင်း (Having Enough Sleep)– ညအိပ်ချိန်ကို အနည်းဆုံး (၈) နာရီခန့် ကြာအောင် အိပ်သင့်ပါတယ်။(၂) အာဟာရ လုံလောက်၊ မျှတစွာ စားသောက်ခြင်း(Having Nutritional Meal)– တစ်နေကုန် နေပူထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အစားအစာကို လုံလောက်အောင် စားပေးရပါမယ်။ မနက်စာကို (မဖြစ်မနေ) အစာခံသောအစာများ (ကယ်လိုရီများသော အစားအစာများ) စားပေးရပါမယ်။လမ်းမှာ ဗိုက်ဆာရင် စားဖို့အတွက် အပို စားစရာအဖြစ် (ပေါင်မုန့်၊ ကြက်ဥပြုတ်၊ အချိုမုန့်) တစ်ခုခုကို ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။(၃) မကြာခဏ ရေဓာတ် အားဖြည့်ပေးခြင်း (Frequent Water Intake)
နေပူထဲမှာ လမ်လျှောက်ရတဲ့အခါမှာ ချွေးထွက်များခြင်းကြောင့် ရေဓာတ်ဆုံးရှူံးမှု (Dehydration) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရေကို မကြာခဏ နည်းနည်းချင်းစီ သောက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။– ခေါင်းမူးတတ်သူ၊ ချွေးထွက်များတတ်သူများ၊ ပင်ပန်းလွယ်သူများအနေနဲ့ အားဖြည့်ဓာတ်ဆားရည် (Hydration Drinks)တွေဖြစ်တဲ့ Royal-D, Pocari Sweat, 100+ Plus အစရှိတာတွေကို သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။– လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အပူရှပ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် ရေခဲရေ သောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။(၄) အကြောလျှော့ပေးခြင်း (Stretching out)– လမ်းမလျှောက်ခင်နဲ့ လမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ (၃-၅ မိနစ်ခန့်) အကြောလျှော့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကြွက်တက်ခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ညောင်းညာ၊ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။(၅) အစာခြေစနစ် ကောင်းမွန်းအောင် နေထိုင်၊ စားသောက်ခြင်း (Healthy Digestive System)– ဝမ်းပျက်စေမယ့် ပူသော၊ စပ်သော၊ ချဉ်သော အစရှိတဲ့ အစားအစာများကို ရှောင်ကြဉ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။– လေချုပ်၊ ဝမ်းချုပ်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာများ (ကောက်ညှင်း၊ လက်ဖက်) အစရှိတာတွေကို ပမာဏ အနည်းငယ်သာ စားသင့်ပါတယ်။– အသီးအရွက် (ပန်းသီး၊ လိမ်မော်သီး စသည်တို့) နှင့် အမျှင်ဓာတ်ပါစေသော အရွက်များ (ကစွန်းရွက်၊ ပဲပင်ပေါက် စသည်တို့) ပိုစားပေးသင့်ပါတယ်။– ရေများများ သောက်ပေးပါ။ (တစ်နေ့လျှင် ၂ လီတာမှ ၄ လီတာခန့်)(၆) Sunscreen ပုံမှန် လိမ်းပေးခြင်း-​နေလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် SPF 35 (သို့) SPF 50 ပါတဲ့ နေလောင်ခံ ခရင်မ်ကို ၃ နာရီခြား တစ်ခါလောက် လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ နေပူထဲသွားလျှင် လက်ရှည်အင်္ကျီ၊ ထီး (သို့) ဦးထုပ် ဆောင်သွားပါ။ဖြစ်လာရင်ရော ဘယ်လိုကုသသင့်လဲ ?(၁) ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း (Headache & Fever)– အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်းခံစားရပါက အစာစားပြီး အိပ်ယာမဝင်ခင် Biogesic ၁ လုံး သောက်ပေးရပါမည်။– အကယ်၍ ကိုယ်ပူပြီး အဖျားအနည်းငယ် ရှိပါက အစာစားပြီး အိပ်ယာမဝင်ခင် Paracetamol 500 mg ၁ လုံး သောက်ပေးရပါမည်။
(၂) ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားများ နာကျင်၊ကိုက်ခဲခြင်း (Muscle Pain)– ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားများ နာကျင်၊ကိုက်ခဲမှု သက်သာစေရန်အတွက် လိမ်းဆေး (သို့) ပလတ်စတာများ ရှိပါတယ်။ (Voltex,Tiger Balm etc.)သောက်ဆေးအနေနဲ့ကတော့ Biogesic, Para-denk, Paracetamol တို့ကို သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။(၃) နေလောင်ခြင်း (Sunburn)– နေလောင်သွားသော နေရာတစ်ဝိုက်ကို ရှားစောင်း လက်ပက် ဂျယ်လ် (Aloe Vera Gel) လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ နေရောင်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။အပြင်သွားလျှင် နေလောင်ခံ ခရင်မ် (Sunscreen) မဖြစ်မနေ လိမ်းပြီးမှ၊ လက်ရှည်အင်္ကျီ၊ ထီး (သို့) ဦးထုပ် ဆောင်းသွားသင့်ပါသည်။(၄) လေအောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း (Indigestion,Constipation, Diarrhea)– လေအောင့်တတ်သူများကတော့ အစာကြေဆေး (Air-X, Digene, Kremil S) တို့ကို ဆောင်ထားပါ။– ဝမ်းချုပ်တတ်သူများကတော့ ဝမ်းမှန်စေမယ့် အစားအစာများကို ပိုစားပေးပါ။ လိုအပ်လျှင် ဝမ်းနှုတ်ဆေး (သို့) ဝမ်းချူဆေး အသုံးပြုပါ။–ဝမ်းပျက်တတ်သူများကတော့ ဓာတ်ဆားရည် အလုံအလောက် သောက်ပေးပြီး အစာပျော့ပျော့ (ဆန်ပြုတ်၊ စွပ်ပြုတ်)တို့ကို အားပြည့်စေရန် စားသောက်ပေးပါ။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ တော်တော်များများ သိသင့်တဲ့ အချက်တွေ သိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ခင်မျာ။ ကျနော် ရေးထားတဲ့ဒီ Article Post လေးက အနည်းနဲ့အများတော့ အထောက်အကူပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ခင်မျာ။မြန်မာပြည်သူ၊ပြည်သားများ အားလုံး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး စိတ်ကျန်းမာခြင်း၊ ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ ပြည်စုံနိုင်ကြပါစေခင်များCredit DR. KYI CHAN KO
အခုလို နတေို့ငျးနီးပါး နပေူထဲမှာ လမျးလြှောကျနသေူတှမှော အမြားဆုံး ဖွဈတတျတာ တှကေတော့(၁) အပူရှပျခွငျး (Sunstroke)(၂) လညျခြောငျးနာခွငျး (Sore Throat)(၃) ရဓောတျဆုံးရှုံးခွငျး (Dehydration)(၄) ပငျပနျး၊နှယျနယျလှယျခွငျး (Tireness)(၅) ကွှကျသားမြား ညောငျးညာ၊ ကိုကျခဲခွငျး (Muscle Pain)(၆) ခေါငျးမူး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး (Headache)(၇) အနျခငျြသလို ခံစားရခွငျး (Nausea)(၈)အသားအရေ နလေောငျခွငျး (Sunburn)(၉)ဆီး၊ ဝမျး၊လခြေုပျခွငျး (Constipation) အစရှိတဲ့ ရောဂါ၊ လက်ခဏာမြားကို ခံစားရတတျပါတယျ။ဘယျလိုကွိုတငျကာကှယျသငျ့လဲ ?အပျေါမှာ ပွောပွပေးသှားတဲ့ အခကျြတှေ မဖွဈအောငျ ကွိုတငျ၊ ကာကှယျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြားကတော့ –(၁)လုံလောကျစှာ အိပျစကျခွငျး (Having Enough Sleep)– ညအိပျခြိနျကို အနညျးဆုံး (၈) နာရီခနျ့ ကွာအောငျ အိပျသငျ့ပါတယျ။(၂) အာဟာရ လုံလောကျ၊ မြှတစှာ စားသောကျခွငျး (Having Nutritional Meal)– တဈနကေုနျ နပေူထဲမှာ လမျးလြှောကျရမှာဖွဈတဲ့အတှကျအစားအစာကို လုံလောကျအောငျ စားပေးရပါမယျ။ မနကျစာကို (မဖွဈမနေ) အစာခံသောအစာမြား(ကယျလိုရီမြားသော အစားအစာမြား) စားပေးရပါမယျ။လမျးမှာ ဗိုကျဆာရငျ စားဖို့အတှကျ အပို စားစရာအဖွဈ (ပေါငျမုနျ့၊ ကွကျဥပွုတျ၊ အခြိုမုနျ့) တဈခုခုကို ဆောငျထားသငျ့ပါတယျ။(၃) မကွာခဏ ရဓောတျ အားဖွညျ့ပေးခွငျး (Frequent Water Intake)
နပေူထဲမှာ လမျလြှောကျရတဲ့အခါမှာ ခြှေးထှကျမြားခွငျးကွောငျ့ ရဓောတျဆုံးရှူံးမှု (Dehydration) ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ရိုးရိုးရကေို မကွာခဏ နညျးနညျးခငျြးစီ သောကျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။– ခေါငျးမူးတတျသူ၊ ခြှေးထှကျမြားတတျသူမြား၊ ပငျပနျးလှယျသူမြားအနနေဲ့ အားဖွညျ့ဓာတျဆားရညျ (Hydration Drinks)တှဖွေဈတဲ့ Royal-D, Pocari Sweat, 100+ Plus အစရှိတာတှကေို သောကျပေးသငျ့ပါတယျ။– လညျခြောငျးနာခွငျး၊ အပူရှပျခွငျးတို့ကို ကာကှယျရနျ ရခေဲရေ သောကျသုံးခွငျးကို ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။(၄) အကွောလြှော့ပေးခွငျး (Stretching out)– လမျးမလြှောကျခငျနဲ့ လမျးလြှောကျပွီး ပွနျလာတဲ့အခြိနျမှာ (၃-၅ မိနဈခနျ့) အကွောလြှော့ လကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ ကွှကျတကျခွငျး၊ ကိုယျခန်ဓာညောငျးညာ၊ကိုကျခဲခွငျးတို့ကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။(၅) အစာခွစေနဈ ကောငျးမှနျးအောငျ နထေိုငျ၊ စားသောကျခွငျး (Healthy Digestive System)– ဝမျးပကျြစမေယျ့ ပူသော၊ စပျသော၊ ခဉျြသော အစရှိတဲ့ အစားအစာမြားကို ရှောငျကွဉျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။– လခြေုပျ၊ ဝမျးခြုပျစနေိုငျတဲ့ အစားအစာမြား (ကောကျညှငျး၊ လကျဖကျ) အစရှိတာတှကေိုပမာဏ အနညျးငယျသာ စားသငျ့ပါတယျ။– အသီးအရှကျ (ပနျးသီး၊ လိမျမျောသီး စသညျတို့) နှငျ့ အမြှငျဓာတျပါစသေော အရှကျမြား (ကစှနျးရှကျ၊ ပဲပငျပေါကျ စသညျတို့) ပိုစားပေးသငျ့ပါတယျ။– ရမြေားမြား သောကျပေးပါ။ (တဈနလြေှ့ငျ ၂ လီတာမှ ၄ လီတာခနျ့)(၆) Sunscreen ပုံမှနျ လိမျးပေးခွငျး-နလေောငျဒဏျကို ကာကှယျဖို့အတှကျ SPF 35 (သို့) SPF 50 ပါတဲ့ နလေောငျခံ ခရငျမျကို ၃ နာရီခွား တဈခါလောကျ လိမျးပေးသငျ့ပါတယျ။ နပေူထဲသှားလြှငျ လကျရှညျအင်ျကြီ၊ ထီး (သို့) ဦးထုပျ ဆောငျသှားပါ။ဖွဈလာရငျရော ဘယျလိုကုသသငျ့လဲ ?(၁) ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ဖြားနာခွငျး (Headache & Fever)– အိမျပွနျလာတဲ့အခြိနျမှာ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ခေါငျးမူးခွငျးခံစားရပါက အစာစားပွီး အိပျယာမဝငျခငျ Biogesic ၁ လုံး သောကျပေးရပါမညျ။– အကယျ၍ ကိုယျပူပွီး အဖြားအနညျးငယျ ရှိပါက အစာစားပွီး အိပျယာမဝငျခငျ Paracetamol 500 mg ၁ လုံး သောကျပေးရပါမညျ။
(၂)ခန်ဓာကိုယျ ကွှကျသားမြား နာကငျြ၊ကိုကျခဲခွငျး (Muscle Pain)– ခန်ဓာကိုယျ ကွှကျသားမြား နာကငျြ၊ကိုကျခဲမှု သကျသာစရေနျအတှကျ လိမျးဆေး(သို့)ပလတျစတာမြား ရှိပါတယျ။ (Voltex,Tiger Balm etc.) သောကျဆေးအနနေဲ့ကတော့ Biogesic, Para-denk, Paracetamol တို့ကို သောကျသုံးနိုငျပါတယျ။(၃) နလေောငျခွငျး (Sunburn)– နလေောငျသှားသော နရောတဈဝိုကျကို ရှားစောငျး လကျပကျ ဂယျြလျ (Aloe Vera Gel) လိမျးပေးသငျ့ပါတယျ။ နရေောငျကို တိုကျရိုကျထိတှခွေ့ငျးမှ ရှောငျကွဉျပေးပါ။အပွငျသှားလြှငျ နလေောငျခံ ခရငျမျ (Sunscreen) မဖွဈမနေ လိမျးပွီးမှ၊ လကျရှညျအင်ျကြီ၊ ထီး(သို့)ဦးထုပျ ဆောငျးသှားသငျ့ပါသညျ။(၄) လအေောငျ့ခွငျး၊ ဝမျးခြုပျ၊ ဝမျးပကျြခွငျး (Indigestion,Constipation, Diarrhea)– လအေောငျ့တတျသူမြားကတော့ အစာကွဆေေး (Air-X, Digene, Kremil S) တို့ကို ဆောငျထားပါ။– ဝမျးခြုပျတတျသူမြားကတော့ ဝမျးမှနျစမေယျ့ အစားအစာမြားကို ပိုစားပေးပါ။ လိုအပျလြှငျ ဝမျးနှုတျဆေး (သို့) ဝမျးခြူဆေး အသုံးပွုပါ။–ဝမျးပကျြတတျသူမြားကတော့ ဓာတျဆားရညျ အလုံအလောကျ သောကျပေးပွီး အစာပြော့ပြော့ (ဆနျပွုတျ၊ စှပျပွုတျ)တို့ကို အားပွညျ့စရေနျ စားသောကျပေးပါ။ဒီလောကျဆိုရငျတော့ တျောတျောမြားမြား သိသငျ့တဲ့ အခကျြတှေ သိရှိသှားလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျခငျမြာ။ ကနြျော ရေးထားတဲ့ဒီ Article Post လေးက အနညျးနဲ့အမြားတော့ အထောကျအကူပေးနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ ခငျမြာ။မွနျမာပွညျသူ၊ပွညျသားမြား အားလုံး ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးပွီး စိတျကနျြးမာခွငျး၊ ကိုယျခမျြးသာခွငျးနဲ့ ပွညျစုံနိုငျကွပါစခေငျမြားCredit DR. KYI CHAN KO